I-Digimind: Uhlalutyo lweMidiya yoLuntu kwiShishini | Martech Zone
I-Digimind: Uhlalutyo lweMidiya yoLuntu kwiShishini
NgoMgqibelo, Agasti 27, 2016 NgoMgqibelo, Agasti 27, 2016 Douglas Karr
I-Digimind ikhokelela ekubekweni kweliso kwimithombo yeendaba ye-SaaS kunye nenkampani yezobukrelekrele ezisetyenziswa ziinkampani zeshishini kunye neearhente ezisebenza nabo. Inkampani ibonelela ngezisombululo ezininzi:
IDigimind yeNtlalo -Kukuqonda abaphulaphuli bakho, ukulinganisa ukuthengisa kwakho kwi-ROI, kunye nokuhlalutya igama lakho.
Ubukrelekrele beDigimind -Ubonelela ngokhuphiswano kunye nokubeka esweni umzi-mveliso ukuze ulindele ukutshintsha kweemarike kwaye uchonge amathuba oshishino.
IZiko loLawulo lweNtlalo -Iziko lokubonisa lexesha lokwenyani ukubonisa ukubonakala kwegama lakho kwintengiso.
Nge-Digimind yeNtlalontle, unokubeka iliso, uhlalutye, ubandakanyeke, unike ingxelo, ulinganise i-ROI, kwaye ulawule igama lakho kwi-Intanethi.
I-Digimind yahlukile kuba babambisana nabo Ditto kunye nokudityaniswa kwenkqubo yokwamkelwa komfanekiso kwizixhobo zabo, enika iimveliso ithuba lokubeka esweni ukukhankanywa kwezentlalo ezinokubonakala ngaphandle kokubhaliweyo!
Le nkqubela phambili inokusetyenziswa ngeendlela ezininzi:
Uhlalutyo lwentsebenzo yenkxaso-mali okanye yobambiswano ngexesha lomculo, ezemidlalo okanye umsitho wenkcubeko, kunye nokulinganisa ukuvezwa kwegama ngokubhekisele kwizithuba ezibonakalayo ezingakhankanyi uphawu ngokubhaliweyo.
Fumanisa impembelelo entsha uluntu okanye oonozakuzaku abanokubakho abathumela imifanekiso yophawu kodwa bangayichazi kumbhalo.
Ukuqonda ngokucacileyo imikhwa yabathengi kunye neemvakalelo Ukuya kwiimveliso kunye neenkonzo zalo.
Ukukhusela i-brand ngokuchasene nobuqhetseba, njengeemveliso zomgunyathi, ngaloo ndlela kuncitshiswa imeko enokubakho.
Ubuntlola boKhuphiswano lweNtlalo
Intlalontle kwinqanaba -Fumana ukufikelela kwi-Twitter Firehose epheleleyo, iPinterest, i-Instagram kunye nazo zonke iinethiwekhi ezinkulu zentlalo ezingaphezulu kwezigidi ezili-120 zolwazi ezibekwe esweni yonke imihla.
Uvavanyo oluPhambili -Fumana ukufikelela kwizixhobo zokukhupha, ukukhasa kwezobukrelekrele, imithombo ekhuselweyo ngegama eligqithisiweyo kunye newebhu engabonakaliyo.
Umbhalo weMining Itekhnoloji yoLwimi lweNdalo esekwe kufundo lomatshini nakwiinjini zohlalutyo lweesemantic zokuhlelwa ngokwamacandelo kunye nokufunyanwa komsitho.
Uhlalutyo lwexesha lokwenyani -Uhlalutyo lwexesha lokwenyani lwembali kunye nee-injini zohlalutyo ezili-14.
Intsebenziswano kunye nezeNtlalontle -Ukulawula iiprojekthi zehlabathi zeekomiti zabo bonke ubungakanani nolawulo lwamalungelo, iindlela zentlalo kunye neempawu zokusebenzisana.
Iintlawulo -Iincwadana, iingxelo eziprintiweyo, izilumkiso, uluhlu lokubukela, iiwebhusayithi- zombini kwidesktop nakwiselfowuni (kubandakanya i-iOS kunye ne-Android).
U-Sony ukhethe i-Digimind kwimisebenzi yethu yemidiya yoluntu njengesixhobo sabo esilungiselela iimfuno zethu, zidityaniswa nabaxhasi abomeleleyo kunye nexesha elikhawulezileyo lokujika izicelo zethu. UTan Khim Lynn, Umphathi wezoShishino kwaSony
Qalisa ukulingwa kwamahhala kweDigimind
tags: ukumbacinga ubukrelekreleIntetho yesibongo, imvelaphi, ukuhambelana kwefayili DigimindishtoIilebhu zedittoishishini iziko lomyalelo wentlaloishishini kwimidiya yoluntuukuqonda umfanekisoUhlalutyo lwamajelo eendaba okwenyaniindawo yokuyalelaImidiya yokuncokolauhlalutyo kwimidiya yoluntuukubeka iliso kwimidiya yoluntuingxelo yemidiya yoluntuimigca yokubhaliweyo kwezentlaloisicatshulwa semigodiukuphulaphula okubonakalayo
Iindlela ezili-11 zokuziphatha kakubi nge-imeyile ukuthintela ngaphandle kokuba ufuna ababhalisile abanomsindo
Iindlela ezi-6 eziBalaseleyo eziya kuthi zonyuse ukuthatha kwakho inxaxheba kuPhando loMthengi